Rayson | Igbe nchekwa dị ala dị ala
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi ngwaahịa kacha mma dị ọnụ ala na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-enye onyinye. Ruo ókèala a na-esi nri na mmiri na-eme ogologo oge mmiri na-adịgide adịgide na ndụ ozi ogologo oge na-eme ka ngwaahịa ahụ dị iche na ndị asọmpi anyị. Ngwaahịa ahụ nwere ike inye nchebe maka ihe ahụ. A na-eji ya site na fewweight, ihe na-emetụta-na-eguzogide na-eguzogide ya na nke siri ike na-enyekwu nchebe. dị ọnụ ala na-acha uhie uhie Ngwaahịa ahụ nwere mmetụta na-achọsi ike. O nwere ike kesaa ibu na nrụgide n'ofe ụkwụ iji belata mmetụta ọdịda.
Ọ na-agbasi mbọ ike mgbe niile, Rayson etolitela ịbụ onye na-achụ n'ụlọ ahịa na ndị ahịa. Anyị na-elekwasị anya n'ịdị ike nke sayensị na azụmaahịa ọrụ. Anyị edobela ngalaba ọrụ ndị ahịa ka ọ ka mma nye ndị ahịa na ọrụ ngwa ngwa gụnyere ọkwa nsuso. Igbe nchekwa dị ala dị ala anyị kwere nkwa na anyị na-enye ndị ahịa ọ bụla nwere ngwaahịa dị elu gụnyere ọrụ igbe dị ala na ebumnuche zuru oke. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata nkọwa ndị ọzọ, anyị nwere obi ụtọ ịgwa gị.th ngwaahịa bụ ezigbo asụsụ site na akara ya na-enye ọtụtụ ihe na-eweta. Dịka ọmụmaatụ, ọ na - enyere aka igosipụta uto nke uche onwe ya ma ọ bụ ụdị.